Isona esona siqhelo sentsholongwane ngexesha lokukhulelwa ngumfuyo wesinambu. I-candidiasis, eyaziwa ngokuba yi "thrush" yiyona nto ibandezelekayo yabesifazane. Yintoni enokuyenza xa ukuxilongwa kwe-candidiasis kunikwe yona ngexesha lokukhulelwa?
Kwaye kufuneka kuphawulwe ukuba oku kuxilongwa kwabasetyhini abakhulelweyo kubangamaxesha amabini kunamathuba amathathu kunabesifazane abangakhulelweyo. Izibalo ezinjalo ezidakisayo zihambelana ngqo nelokuba xa bekhulelwe, izinga lama-hormone wesini esithintekayo ngokuthe ngqo kwi-microflora yamabhinki yanda. Ngethuba lokukhulelwa, ummandla wemichiza wesisu umama olindelekileyo uya kuba lukhuni ngakumbi, ngaloo ndlela kudala umhlaba ocebileyo wokuhlala kunye nokuveliswa kweebhaktheriya ze-pathogenic, ngakumbi imvubelo. Ukutshintsha kweHormonal kukhokelela ekunciphiseni ukukhusela umzimba kunye nokunciphisa umsebenzi we-leukocyte, onomphumo onokubakhokelela ekuphuculeni i-candidiasis.
Uhlalutyo lwe-DNA (i-PCR), i-bacteriological culture okanye i-microscopic uvavanyo lwe-swab yesisu elikhulelweyo liza kuqinisekisa okanye ukuphikisa ukuxilongwa kwe-candidiasis.
Ebonakalayo kumfazi wesifazana, i-fungus iqalisa ukunyakaza kwayo, ngokukhawuleza ukulungele umntwana. I-agent causative iyakwazi ukuthintela iziganeko ezininzi kunye neenkqubo ze-fetus, kodwa ngokuqhelekileyo isilonda sichaphazela intambo yomzimba, isikhumba, i-membrane, i-pulmonary system. Ngokusasazeka kwe-candidiasis, imiphumo yengane ingaba lusizi kuze kube sekufeni.
Indlela yokuphatha i-thrush ukuba ukhulelwe.
Umgaqo wokuqala kunye nomgaqo wokugqibela unyango kufuneka ukhethe ugqirha. Ewe, ngoku kukho ukuthengiswa ezininzi kumaphephandaba, okuthembisa ukukrazula isigulo emva kwepilisi enye kuphela, kodwa, ngelanga, yonke into ayifanelekanga, ezi ziyobisi ziyakuthintela i-pathogen ixesha elithile. Usulelo luhlala emzimbeni kwaye luyaqhubeka lulimaza, kwaye luyakwazi ukusabalala kwizitho zangaphakathi, ukwenza ama-spikes, okwenza kube neengxaki ezibuhlungu.
Ubuninzi bokubambisana ngexesha lokukhulelwa luyisongelo esibalulekileyo ekuthwaleni umntwana. Kwaye nangona bekungekho iingxaki ezinokuthi zithwale, ngoko ngexesha lokunikezelwa, xa umntwana esedlula kwi-canal yokuzalwa, usengozini yokufumana isifo sofayo. Unyango lwezilwanyana ezinsana kwiimeko ezinjalo zide.
Ngokuqhelekileyo isisombululo esona siphumo sokuphatha i-thrush siya kukuphelisa nakwinqanaba lokucwangcisa ukukhulelwa. Kodwa ukuba kwenzeka njalo ukuba ukhulelwe kwaye ufumene i-thrush, musa ukuphelelwa lithemba, ngoku kukho izidakamizwa ezininzi ezisetyenziswayo ukulwa ne-candidiasis, ngaphandle kokulimaza impilo yengane ezayo.
Phakathi kwezi zonyango, okokuqala, unyango lwendawo, i-suppositories, ukhilimu wesisu, iipilisi.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba kusetyenziswe unyango lwe-systemic ukuphatha i-thrush, oko kukuthi, ukuthatha iziyobisi ngaphakathi kwenzeni emathunjini, kwaye ungene kwigazi kwaye uthintele zonke izitho kunye nezicubu. Kodwa, ngexesha lokukhulelwa, unyango lwenkqubo kufuneka lwenziwe ngokukodwa ngokwemigqaliselo yonyango.
Ukongeza kwiindlela zamasiko zonyango, kukho abantu. Phakathi kwabo, kukho i-borax kwi-glycerin, into eluhlaza. Benza kuphela emgangathweni kwaye banciphise iimpawu (ukubetha, ukuvuvukala), abakwazi ukususa ngokupheleleyo i-pathogen. Ezi zisombululo ziyakwazi ukususa umtshini we-mycelium kwiindonga zesini, aziyiziphumo ezingekho nangoko, ngoko zisebenzise njengendlela yokwenza unyango kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, xa ukufunyanwa kwamaphibhele kuncinci.
Xa i-candidiasis, abafazi abakhulelweyo banokumisela imithi yokubuyisela nokuvuselela imithi ngokubanzi.
Ingqwalasela ngokukodwa ihlawulwa ekudleni. Kunconywa ukunciphisa i-sweet, ecolile kwaye ikhetha bifidoproduktam.
Intlungu yesisu ngexesha lokukhulelwa kwangaphambili
Ngaba kunokwenzeka ukuya ecaweni kubafazi abakhulelweyo?
Indlela yokugcina impilo yowesifazane okhulelweyo kunye nomntwana ozayo
UNika Belotserkovskaya wabonisa uKsenia Sobchak nomntwana wakhe, isithombe
Izidlo ezigqibeleleyo zoNyaka omtsha
Iipropathi zokwelapha ze-rosemary